သရုပ်ဆောင် | မိုးစက်မှော်
Filed under: ရှင်းတမ်း/ကြော်ငြာ — 1 Comment
ကျွန်တော့်ဘ၀တွင် လုပ်ချင်ရက်နဲ့ မလုပ်ခဲ့ရသော အလုပ်နှစ်ခု ရှိပါတယ်။ ကျောင်းဆရာအလုပ်နဲ့ သရုပ်ဆောင်အလုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကတော့ အရူးထခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်၊ ကျောင်းဆရာကတော့ တဲတဲလေးလွဲခဲ့ရတာပါ။ ကျောင်းဆရာဖြစ်ခဲ့ရင် အခုလို ဆယ်နှစ်အကြာမှာ ဘာဖြစ်နေမှာပါလိမ့်လို့ တခါတလေ တွေးမိတယ်။
တကယ်ပြန်စဉ်စားနေမိတာက သရုပ်ဆောင်အလုပ်ပါ၊ လူတွေ ငိုအောင် ရယ်အောင် တခုခု ခံစားသွားရအောင် ရှေ့ကနေ လုပ်ပြရတဲ့ အလုပ်၊ အဲဒီအလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားခဲ့ဖူးတယ်။ အရူးအမူးတော့ မဟုတ်၊ တို့ထိတို့ထိလောက်ပေါ့။ အခု မင်းသား ခန့်စည်သူတို့ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် သင်တန်းတက်တုန်းကတခါ ကျွန်တော်လည်း တက်ဖို့ နည်းနည်း ကြိုးစားကြည့်သေးတယ်။ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးရှေ့တောင် ရောက်နေပြီ၊ မလုပ်ပါနဲ့ကွာ… မလွယ်လောက်ပါဘူးလို့ ကိုယ့်ဘာသာ ဆုံးမပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်။
ငွေကြေး၊ ပံ့ပိုးမှု၊ အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှု၊ ကံ၊ စန်း၊ မီဒီယာ၊ ဆရာသမား အများကြီးမှ အများကြီး၊ အဲ… မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်မယ်၊ ရူးသွပ်တယ် ဆိုရင်တော့ တမျိုးပေါ့လေ၊ ဘေးကလူတောင် မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ကူညီရမယ့်အပေါက်မျိုး အထိတော့ မရူးသွပ်ဖူးပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း မဖြစ်လာတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း ကံကောင်းသွားတာပေါ့လေ၊ မဟုတ်ရင် မြန်ုမာ့သရုပ်ဆောင်လောကရဲ့ ရုပ်အဆိုးဆုံးနဲ့ အချာဆုံး သရုပ်ဆောင် တယောက်ကို ကြည့်နေရမယ့် အဖြစ်။
တခါသားမှာတော့ အမေ့မိတ်ဆွေကြီးတယောက်ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဒါရိုက်တာ ညီညီထွန်းလွင် ရိုက်ကူးတဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတခုမှာတော့ နေ့တွက်ကြေးနဲ့ သရုပ်ဆောင် သွားလုပ်မိသေးတယ်။ အို့ အို အို… သရုပ်ဆောင်အလုပ်၊ ရင်ရှုပ်စေတဲ့ ရုပ်ရှင်အလုပ် မလုပ်ခဲ့မိတာ ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အတွေး ပေါ်ခဲ့ဖူးတယ်။
အဲဒီတုန်းက မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးက သူထူးစံနဲ့ ဆုရွှန်းလဲ၊ မှတ်မိနေသေးတယ်။ အမေ့မိတ်ဆွေက အရင်က တိုင်းတရားသူကြီးပေပဲ၊ ပင်စင်ယူပြီးနောက်မှာမှ ၀ါသနာ ဗီဇက ထလာကြွလာလေတော့ သူအပိုင်နိုင်ဆုံး ဇာတ်ရုပ်ဖြစ်တဲ့ တရားသူကြီးတို့၊ ရှေ့နေခန်းတို့မှာ ပါနေကြ၊ မြန်မာဗီဒီယိုကားတွေတိုင်းမှာ တရားသူကြီးခန်း ပါပြီဆိုရင် သူပါပဲ။
သူက မင်းဝါသနာပါရင် တခါလောက် စမ်းကြည့်ပေါ့ကွ ဆိုတာနဲ့ သူ့လက်ထောက် ရှေ့နေကလေးလား၊ ဆရာ့အိတ်ဆွဲလား မသိပါဘူး လုပ်ရမယ်တဲ့၊ ဖုန်းဆက် ခေါ်တာနဲ့ တထည်တည်းသော တိုက်ပုံအနက် ယူပြီး ကီလီ ၆ (ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းများ တည်ရာ) ကို အပြေးလိုက်သွားခဲ့မိတယ်။ တခန်းလား ဘက်ဂရောင်းက ပါဖို့အတွက် တနေကုန်ပါရောလား။
ဒါက အတွေ့အကြုံကို အသောနှောလို့ ပြောပြတာပါ၊ အခုတော့လည်း စဉ်းစားမိတာက… ပရိသတ်အတွက်သာ သရုပ်ဆောင်သီးသန့် မဖြစ်ခဲ့တာလို့… ငါဟာ နေ့တိုင်း သရုပ်ဆောင် ဖြစ်နေပါပေါ့လားပေါ့။ ဟုတ်တယ်လေ… ပြုံး၊ ရယ်၊ မဲ့၊ ငို၊ စကားတင်းဆို၊ ဒေါသထိုထို၊ မကျေနပ်လိုက်၊ ချေဖျက်လိုက်နဲ့ အမျိုးမျိုး နေ့စဉ်မှာကို ပြောင်းလဲ လှုပ်ရှား နေရတာမို့လား။
အခု အကောင်း၊ ခဏနေတော့ ဆိုးတော့တယ်။ အခု ပျော်နေရင်း ခဏနေတော့ စိတ်တွေ လေးနေတယ်။ ဘယ်အရာမှ အကြာကြီး မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကို သိသိနဲ့ပဲ ရင်မောနေတော့တယ်။ တခါတလေတော့ တယောက်ထဲ ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်မော၊ ရူးများသွားသလားလို့တောင် ထင်မှတ်ရတယ်။ ရယ်နေတာ အကောင်းမထင်နဲ့လို့ ပြောတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ကိုလည်း အမှတ်ရတယ်။
ပျော်လို့ ရယ်တာ မဟုတ်ဘူးလား၊ စိတ်ညစ်လည်း ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ ရယ်ကြသလား။ စိတ်ညစ်တိုင်း ကျွန်တော်ကတော့ ရယ်ချည်း နေမိတယ်။ ခက်တာက သရုပ်ဆောင်ပါး မ၀သေးတာပါပဲ၊ ဒီတော့ ရယ်သာရယ်တယ်၊ ရယ်နေတာနဲ့ မတူဘူး… ရယ်ရတယ်ဆိုတာမျိုးကို ဖြစ်ရော…။
ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ အဟုတ်ချည်းပေါ့၊ ထင်တလုံးနဲ့ပေါ့။ တကယ့်တကယ် သူတင်ကိုယ်တင်ကြတော့မှ အမယ်မင်းရယ်နဲ့မှဆိုတဲ့ အဖြစ်… ရယ်တာကိုက ရယ်ချင်စရာ ကောင်းနေခဲ့တယ်၊ ခုနပြောသလိုပေါ့… အကောင်းတော့ မထင်လေနဲ့။
ဘာမှမဖြစ်ချင်ခဲ့လို့ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ရင် ဘာမှဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ၊ အခုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပိုင်သလိုလို နိုင်သလိုလို တတ်သလိုလို နပ်သလိုလို လူကြည့်များတဲ့ လောကဇာတ်ခုံပေါ်တက်လာတော့လည်း ဖြဲရဲ ပဲရွေးသလို ကြည့်၊ ခဲနဲ့တမျိုး ဆဲရေးလို့တဖုံ အမျိုးမျိုး အားပေးတော့လည်း ဟဟ… လုပ်ကြပါဦး ဇာတ်ထုပ်နဲ့ ကန့်လန့်ကာနောက် ပြေးဝင်မှောက်ရင်တော့ စင်ရှေ့ ခဲထိတာကမှ ပွဲကြည့်များက ရယ်ဦးမယ်၊ ကံစွပ်ကံဖျား ပရိသတ် ရသွားဦးမယ်။
အခုတော့ ရှေ့က ခဲ ကြောက်လို့ နောက်ကိုတိုး မှောက်ထိုးလဲမှ ဗျောက်အိုးနဲ့ ပစ်တာပါလို့ဆိုလည်း ခေါက်ချိုးမည်းသွားတဲ့ စိတ်ကိုပြင်ရင်း ဒီတသက်တော့ ငါ (ဘယ်နေရာမှာမှ) သရုပ်ဆောင် မဖြစ်တော့ဘူးရယ်လို့ပဲ စိတ်သွင်းရတော့တာပါပဲ။
သရုပ်ဆောင်ချက်များ ဘယ်တကွက်မှ မလွယ် ခက်ပါလားနော်…။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်။
ည ၁၀ နာရီ။
SU SANDAR ZAW
15/03/2011 at 2:51 am
I think your writting skill is really improved and good.
Eventhough I don’t know how to write like that,I can give command,isn’t it?
U write as funny thing,but you gave usalot of thinkings……
« တခါတလေတော့လည်း ထူးဆန်းတယ်
နည်းနည်းလေးတော့ လျှော့စေချင် »